Spain: Ronaldo Oo Soo Noqday + Guusha Real + Sibiq-baxsigii Barca iyo Natiijooyinka Hirdameyaasha LaLiga
HomeWararka MaantaSpain: Ronaldo Oo Soo Noqday + Guusha Real + Sibiq-baxsigii Barca iyo Natiijooyinka Hirdameyaasha LaLiga
Real Madrid ayaa sii adkaysatay hoggaaminta horyaalka Spain ee LaLiga kaddib markii ay 4-1 ku karbaashtay Deportivo Alaves oo ay isku haleeleen garoon ay fadhiyeen taageereyaal xamaasad badan oo qaarkood dhaqan-xumo ku kaceen.
Ronaldo oo ay ka jiiftay tan iyo bilowgii xili ciyaareedkan ayaa dib usoo noolaaday, waxaana uu u dhaliyey Madrid saddex gool markiisii ugu horreysay xili ciyaareedkan, gool afraadna waxa ku daray Morata oo baas qurux badan ka helay Marcelo.
Ciyaartan ayaa Real Madrid u saamaxday in ay hoggaanka ku hayso 24 dhibcood oo ay ka urursatay 10 ciyaarood.
Kaalinta labaad Barcelona ayaa soo gashay kaddib markii ay gool dirqi ah kaga badisay Granada oo ay garoonkeeda Camp Nou ku martigelisay, waxaanay leedahay 22 dhibcood. Goolka dirqiga ah waxa u dhaliyey laacibka reer Brazil ee Rafinha.
Kooxda kaalinta labaad ka daadegtay ee Sevilla oo hadda 3aad ku jirta ayaa barbar dhac 1-1 la gashay Sporting Gijon oo ay booqatay, waxaana goolka wakhti hore u dhaliyey Luciano Dario Vietto, balse Moi Gomez ayaa daqiiqaddii 20aad barbar dhaca u keenay Gijon. Sevilla waxay leedahay 21 dhibcood, iyo kaalinta saddexaad, hase yeeshee, waxa cagta-cagta ugu haysa Atletico Madrid oo 4-2 ku jiidhay Malaga. Yannick Ferreira-Carrasco ayaa daqiiqaddii 7aad goolka koowaad u saxeexay, ka labaad iyo saddexaadna Gameiro ayaa qaybta horeba raaciyey, halka goolka afraadna uu dhamaadkii ciyaarta mar kale ku ceshaday Yannick Ferreira-Carrasco. Marka la eego goolasha, Atletico ayaa kaalinta saddexaad ku jirta, waxaanay leedahay 21 dhibcood. Sidaas daraadeed, Sevilla kaalinta 4aad ayey noqonaysaa.
Wararkii U Dambeeyey Ee FIFA – 2 Madaxweyne Ku Xigeen Iyo Xubno Kale Oo Xidhan